Kedu ihe kpatara hyperventilation? - AHUIKE tinye MAG - TELES Relay
Kedu ihe kpatara hyperventilation? - AHUIKE tinye MAG
Ejikọtara ya na mmụọ nsọ siri ike na mmụba nke ikuku iku ume, hyperventilation na-ebute mbelata carbon dioxide n'ime ọbara na mmụba nke oxygenation. O nwekwara ike ibute ihe a na-akpọ alkalosis respiratory. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mmụba n'ọbara pH. Enweghị ezigbo ọgwụgwọ ahụike, ewezuga anxiolytics iji mee ka nrụgide na nchekasị dị jụụ, ọ dị mkpa na a ga-achọpụta ihe kpatara ya ka mmadụ wee nwee ike ime ihe kwekọrọ na ya wee nwetakwa obi iru ala ya ọsọ ọsọ. Kedu ihe kpatara hyperventilation Anemia, oyi baa, ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ ọrịa obi na-adịghị ala ala, ụfọdụ pathologies nwere ike jikọta ya na ọrịa hyperventilation nke a ga-achọpụta site n'enyemaka nke ndụmọdụ ahụike. Otú ọ dị, ndị ihe kpatara hyperventilation na-adị ọtụtụ ma nwee ike ịgụnye ọtụtụ ihe gbasara ahụike ma ọ bụ nke uche nke nwere ike ịkpata ezigbo nkasi obi kwa ụbọchị na nchekasị ndị siri ike ijikwa.
Ihe gbasara ahụike
Ọ na - eme na ahụ na - arahụ mgbanwe nwere ike ịgbanwe ọnụego iku ume. Nke a na-eme ka onye ahụ ghara ịna-eku ume nke ọma. Steeti ndị a nwere ike ịgụnye:
Nnukwu ogo progesterone
Ọrịa imeju ma ọ bụ akụrụ
Okwu na-aga n'ihu
Hyperventilation - Isi Iyi Healtline
Ebumnuche nke uche
N'ime ihe ndị na-akpalitekarị na hyperventilation, nrụgide na-abụkarị ndepụta nke ihe ndị na-akpata ọrịa uche. Ihe omume ndi mmadu nwekwara ike ibu ihe kpatara osooso nke iku ume site na nsogbu nke ihe a nwere ike ime. Na mkpokọta, a chọpụtara ihe ndị a:
Ndị mmadụ na-achọkarị izu okè
Ọnwụ nke onye a hụrụ n'anya
Ihe omume dikaịgba alụkwaghịm ma ọ bụ nkewa
Ogologo nchegbu A phobia ma ọ bụ oké ụjọ
a ịnọ naanị mụta
Na-adịgide adịgide na-arụ ọrụ metụtara nrụgide
Ihe ndị ọzọ nwekwara ike ịkpalite hyperventilation, gụnyere ihe ndị dị ka cafine ma ọ bụ nicotine, nke na-eme ka ogo nchekasị dịkwuo njọ ma bụrụkwa akụkụ nke usoro iji zere iji gbochie spasmophilia.
Ọnọdụ otu oge ma ọ bụ ogologo oge nwekwara ike ime ka nsogbu nke ọgba aghara dịkwuo elu. N'ime ọdụdụ nwa, Àgwà iku ume na-adịghị mma nke e kuchiri site na nwata ma ọ bụ mmụba nke ụlọ akwụkwọ jikọtara ya na homonụ nwere ike ịkọwa hyperventilation. Mgbe ịwachara ahụ, onye ọrịa na-arịa ọrịa post-traumatic stress mgbe ụfọdụ na-egosipụta dị ka hyperventilation.
Kedu otu esi amata nsogbu hyperventilation?
Iji nwee ike ịkwụsị njide, ọ bụ ihe mbụ dị mkpa iji mara mgbaàmà ahụ, ya bụ polypnea na dyspnea. Nsonaazụ mbu na iku ume ngwa ngwa karịa etu esi eme. Ugboro iku ume na - abawanye ma onye ahụ na - eche na ha anaghị enweta ikuku zuru oke. Dyspnea gosiputara site na nsogbu iku ume. Onye ahụ na-eku ume miri emi mana ọ naghị enwe ike ị nweta ikuku zuru oke n’akpa ume ha. N'otu oge ahụ, ihe mgbaàmà ndị ọzọ metụtara ya nwere ike ime ka ọrịa hyperventilation ka njọ. N'etiti ha, nchegbu, obi mgbu, aka oyi, ọsụsọ, tachycardia, dizziness, ma ọ bụ paresthesia (ndanda na mkpịsị aka gị). Ejikọtara ya, ndị a na-egosipụta njikwa iku ume nke ọma ma nwee ike ịpụta oke nhụjuanya maka onye nwere nsogbu nke na-atụ egwu mgbe niile na njide ga-amaliteghachi.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/quelles-sont-les-causes-de-lhyperventilation/
Johnny Depp: princi el principio de su ikpeazụ? - Vidio
Nwere ike Mamadou Sylla ka “na-emegide otu ọzọ” Alpha Condé? - Nwa okorobịa Africa